လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချိတ်ဆက်သွယ်တန်းရယူရန်အတွက် လျှောက်ထားဆောင်ရွက်ရမည့် အဆင့် များ၊ ကြာမြင့်ချိန်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ မီးရရှိသုံးစွဲမှုတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် မီတာခ နှုန်းထားများ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိမှု။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်အင်တာပရိုက်၏ (၂၀၁၆) ခုနှစ်စစ်တမ်းအရ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တတိယအကြီးဆုံးအဟန့်အတားတစ်ခုမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းရယူခြင်းနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မှီသော လျှပ်စစ် မီးရယူသုံးစွဲနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အကျိုးရှိသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ခြင်းသည် ဝင်ငွေမြင့်မားမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်လျက်ရှိပါသည်။
ဝင်ငွေမြင့်မားမှုနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအကျိုးရှိသည့် လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ဆက်သွယ်ရယူခြင်း: ယုံကြည်စိတ်ချရသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးပို့မှုသည် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုမြှင့်တင် ပေးပါသည်။ ကန့်သတ်မှုရှိသော/ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အားနည်းသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆက်သွယ်မှုသည် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပိုမိုမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားအပေါ် ကန့်သတ်မှုများ ရှိနေစေပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုနှုန်း- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချိတ်ဆက်သွယ်တန်းမှုအတွက်အချိန်နှင့်ငွေကြေး ကုန်ကျမှုမြင့်မား ခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုနှုန်းကိုနိမ့်ကျစေပါသည်။
စောင့်ကြည့်မူဘောင်အချက်အလက်- လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ၏ အရေးပါဆုံးသောပုံမှန်လုပ်ငန်းနယ်နိမိတ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ပြီးသော လုပ်ငန်းနယ်နိမိတ်(၂၈)ခု ပါဝင်သောလေ့လာမှု တစ်ရပ်အရ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ် ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ မြင့်မားမှုနှင့် ဆက်နွယ်နေပါသည်။
၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းရယူရန် လျှောက်ထားလာခြင်းအတွက်- ထရန်စဖော်မာအသစ်တပ်ဆင်မှုလျှောက်ထားလာခြင်းအတွက် မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံး/မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊
ရုံးချုပ် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံး အဆင့်ဆင့်မှ စိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး
ကော်ပိုရေးရှင်းတွင်လျှောက်ထားလိုပါက လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံကို[https://yesc.org.mm/rates] တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
အခြားပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများအတွက် ထရန်စဖော်မာလျှောက်ထားလိုပါက လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံကို[http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/page/106] တွင်လည်းကောင်း၊ မီတာ လျှောက်ထား လိုပါက လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်လျှေက်လွှာပုံစံကို[http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/page/107]. တွင်လည်းကောင်းရယူနိုင်ပါသည်။ (၁၇)ရက်
၂။ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမည့် ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ထရန်စ ဖော်မာကို လုပ်ငန်း တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခွင့် လိုင်စင်ရထားသော လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်သူများမှ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသစ်ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းမှုအတွက် လျှောက်ထားသူမှ ငှားရမ်းထားသည့် လုပ်ငန်းတည်ဆောက် တပ်ဆင်ခွင့် လိုင်စင်ရထားသော လျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်သူများမှတည်ဆောက် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ပါ
သည်။ သုံးစွဲဝန်အား (၃၀)ကေဗွီအေ အထက် သုံးစွဲမည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲသူများသည်ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလို သည့် အချက်အလက်များကို [https://yesc.org.mm/rates] တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ (၇)ရက်
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေသည် တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း နှင့် ထရန်စဖော်မာ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ အတွက်လုပ်ငန်းတည် ဆောက် တပ်ဆင်ခွင့် လိုင်စင် ရထားသောလျှပ်စစ် ကျွမ်းကျင်သူများကိုပေးချေမှုအပေါ်မူတည်နေပါသည်။
၃။ မီတာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရယူသုံးစွဲရန် လျှောက်ထားသူများကမီတာတပ်ဆင်ရန် အတွက် လျှောက်ထားရပါမည်။ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ကို [http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/page/107, 108 ] တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ (၂) ရက်
မီတာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ငွေပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ သည် မီတာဘောက်စ် အပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
၄။ တည်ဆောက်ပြီး ထရန် စဖော်မာ၊ ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် အဆောက်အဦးအတွင်း လျှပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းမှု များကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရှိ Electrical Inspection အင်ဂျင်နီယာများနှင့် မြို့နယ် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှ ကွင်းဆင်း၍ စမ်းသပ်စစ်ဆေး ခြင်းနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လွှတ်ပေးခြင်း
နောက်ဆုံးအဆင့်စစ်ဆေးမှုကိုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ထရန် စဖော်မာတည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ အင်ဂျင်နီယာ များမှလည်းကောင်း၊အဆောက်အဦ အတွင်း လျှပ်စစ်မီးကြိုးသွယ်တန်းမှု များကို စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရှိ Electrical Inspection အင်ဂျင်နီယာများမှ လည်းကောင်း စစ်ဆေးခြင်းများအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ (၃) ရက်
Doing Business တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိခြင်း၊ ဓာတ်အားခ ကောက်ခံမှုပွင့်လင်းမြင်သာရှိခြင်းတို့အပေါ်တွင်လည်းတိုင်းတာမှုပြုပါသည်။ တိုင်းတာမှုများတွင်_
မီးသုံးစွဲသူတစ်ဉီးချင်းစီအတွက် တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း စုစုပေါင်း ဓာတ်အား ပြတ်တောက်မှုကြာမြင့်ချိန်နှင့် အကြ်မ်အရေအတွက်
ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် ယန္တရားများ/စက်ကိရိယာများ အသုံးပြုမှု
လက်ရှိအခြေအနေတွင် စစ်တမ်းကောက်ယူသည့် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကိုမှတ်တမ်းများထားရှိပြီးဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုနှင့် သတ်ဆိုင်သည့် အညွှန်းကိန်းများကို ထုတ်ပြန်ပေးပါသည်။အဆိုပါဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအခြေအနေအရပ်ရပ်တွင်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သည့်ကြာချိန်၊ တည်နေရာ၊ အကြောင်းရင်းစသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို [ http:// www.moee.gov.mm/mm/ignite/page/631 ၊ http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/ page /628 နှင့် https://yesc.org.mm] တို့တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အခြားသော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများ တွင်လည်း ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုနှင့်သတ်ဆိုင်သည့် အညွှန်းကိန်းများကို ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ဓာတ်အားခနှုန်းထားများကို ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပြီး ပြောင်းလဲမှုများကို လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာစွာသတင်းထုတ်ပြန်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို [http://www.moee. gov.mm/ en/ignite/page/593] တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
အသစ်လျှေက်ထားတပ်ဆင်မည့် ထရန်စဖော်အတွက် လျှောက်လွှာများစစ်ဆေးခြင်း၊ တည်ဆောက်တပ် ဆင်မည့် နေရာစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်သောဓာတ်အားလိုင်းချိတ်ဆက်သွယ်တန်းမှုများ ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးခြင်းတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ချိန်ကို (၂၉) ရက်မှ (၁၇) ရက်အထိ လျှော့ချ ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/page/381 နှင့် http://www.moee.gov.mm/mm/ignite/contentView/1523 တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။
အသစ်လျှောက်ထားတပ်ဆင်မည့် ထရန်စဖော်အတွက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလမှ စတင်၍ (၆) ဆင့်မှ (၅) ဆင့်သို့ လျော့ချဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ယခုအခါ စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှအင်ဂျင်နီယာများမှ နောက်ဆုံးအဆင့်စစ်ဆေးမှုကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်လုပ်ငန်းအဆင့်ကို(၅)ဆင့်မှ(၄)ဆင့်အထိလျော့ချဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများကို[https://yesc. org.mm]တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြာမြင့်ချိန်၊ အကြိမ်အရေအတွက်တို့ကိုအလိုအလျောက် တွက်ချက် ဖော်ပြ ပေးနိုင်ပြီး၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးဝေမှု့ကိုထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်နိုင်မည့် SCADA စနစ် ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကုန်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။SCADA စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့်၍ အသုံးပြုချိန်တွင် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးမှုတွင် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသစ်လျှေက်ထား တပ်ဆင်မည့် ထရန်စဖော်အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံအဆင့်များကိုလွယ်ကူစွာသိရှိ၍ ဆောင်ရွက် လျှောက်ထားနိုင်မည့် လမ်းညွှန်ကိုထုတ်ပြန် ဖော်ပြမှု။ အဆိုပါဖော်ပြမှုတွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ကုန်ကျငွေ၊ ကြာချိန် စသည်တို့ကို website တွင်ဖော်ပြမှု၊ အခြား သက်ဆိုင်ရာပုံနှိပ်စာများဖြင့် ဖော်ပြမှု။ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြပြီး။ [http://www.moee.gov.mm/mm /ignite/page/106] နှင့် [http://www.moee. gov.mm/mm/ignite/page/107] တို့ တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအသစ်ချိတ်ဆက်သွယ်တန်းရန် လျှောက်ထားလာသော လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် တင်ပြရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအားပြန်လည်စိစစ်၍၊ မလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းတောင်းခံမှုကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း။ ထုတ်ပြန်ဖော်ပြပြီး။ [Update required]
၂၀၁၄ခုနှစ် လျှပ်စစ် နည်းဥပဒေအခန်း(၃)တွင် ဖော်ပြမှုနှင့်အညီစည်းမျဉ်း
(Regulatory Commission) တစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်။ Medium Term [Update required]
ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြာမြင့်ချိန်၊ အကြိမ်အရေအတွက် တို့ကိုအလိုအလျောက် တွက်ချက်ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး၊
ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးဝေမှု့ကိုထိန်းချုပ်စောင့်ကြည့် နိုင်မည့် SCADA စနစ် ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်။ Q4 2020 [Update required]
ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြာမြင့်ချိန်၊ အကြိမ်အရေအတွက် တို့ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည့် Sectionalizers, Auto-reclosersနှင့် load break fuse တို့ကို ဆက်လက် တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဓာတ်အားလိုင်းများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် လိုင်းအပြစ် နှင့် ဓာတ်အား ပျောက်ဆုံးမှု များကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း။ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ အသစ်တပ်ဆင်အသုံးပြုသောကိရိယာများတွင် SIMကဒ်များတပ်ဆင်၍ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရရှိနိုင်ပါသည်။ လိုင်းအပြစ်များကိုအမျိုးအစားခွဲခြား၍ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကိုလျှင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြာမြင့်ချိန်ကိုလျော့ချပေးနိုင်ပြီးဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးဝေမှု့ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုမိုရရှိစေပါသည်။